Ofdị sekit eletriki dị ugbu a na ihe niile ịchọrọ ịma | Akụrụngwa n'efu
A ìgwè nke Ihe eletrọniki na blọọgụ a, yana ọtụtụ isiokwu ndị ọzọ na ngwaọrụ, ngwanrọ, ọrụ, wdg. Ọ ga-abụ ihe na-akpali mmasị ịga otu nzọụkwụ n'ihu ma gosi ụdị nke sekit eletriki maka ndị mbido na-amalite n'ụwa nke eletrọniki na ọkụ eletrik.
Na ndụ kwa ụbọchị, ọtụtụ n'ime sekit ndị a na-eji ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'amaghị ama, site na ngwaọrụ mkpanaka ị na-eji kwa ụbọchị, ruo mgbe ịpịrị ntụgharị n'ime ụlọ gị iji gbanye ọkụ ma ọ bụ gbanyụọ, na-akwụsị maka ọtụtụ ngwa ndị ọzọ. Iji ghọta ihe ka mma otú o si arụ ọrụ ihe niile, ana m akwado ka ị gụọ ntuziaka a ...
1 Gịnị bụ okirikiri?
2 Kedu ihe eletriki eletriki?
2.1 Kọmputa circuit
3 Electronicdị eletrọniki eletrọniki
Gịnị bụ okirikiri?
Un sekit Ọ bụ ihe niile zuru ezu ma mechie ụzọ ma ọ bụ ụzọ nke ihe na-agagharị. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịnwe ịgba ọsọ ịgba ọsọ, nke ụgbọ ala na-agba ọsọ na-agbanye; circuit hydraulic, nke ụfọdụ mmiri ga-esi gafere; ma ọ bụ eletriki eletrik, nke eletrik na-agagharị.
Iji nwee ike ịgbasa, ịchọrọ otu ziri ezi ọkara, na mgbakwunye na usoro nke ihe ndị na-enye ya ohere. Dịka ọmụmaatụ, n'okporo ụzọ ịgba ọsọ, ị ga-achọ ụzọ, maka hydraulic nke ịchọrọ ịchọrọ, yana maka eletriki nke onye na-eduzi ihe dị ugbu a.
Kedu ihe eletriki eletriki?
Ọ bụrụ na anyị na-elekwasị anya na a okirikiri eletrik, bụ ụzọ ahụ ma ọ bụ ụzọ nke ọkụ eletrik si aga. Pathzọ a nwere ike ịdị ogologo ma ọ bụ pere mpe ma nwee ọtụtụ ma ọ bụ obere ihe.
Dịka ọmụmaatụ, otu n'ime ọtụtụ isi na sekit na sekit nke a na-enyekarị dị ka ihe atụ na-abụkarị batrị, yana ngbanwe na bọlbụ ma ọ bụ moto. Nke ahụ bụ ihe kachasị mkpa, ebe enwere ndị ọzọ dị mgbagwoju anya, dịka nrụnye eletriki nke ụlọ, ma ọ bụ okirikiri nke igwe elektrọnik.
N'ezie, n'ụdị eletriki a, a ga-enwe usoro nke ọnụọgụ metụtara. Ihe kachasị dị mkpa anyị webatara mgbe anyị nyochara iwu ohm: voltaji, ike na nguzogide.
O doro anya na ị na-eche ihe dị iche na ọkụ eletrik na eletrọniki, ma ọ bụ n'etiti electronic circuit na eletrik eletrik. Na ụkpụrụ, enwere ike iji eletrik eletrik rụọ ọrụ maka okwu abụọ ahụ, ọ bụ ezie na mgbe akọwapụtara ya ma kwuo maka elektrọnik, ọ na-ezo aka na sekit dị ugbu a.
Dịka ọmụmaatụ, anyị na-ekwu maka elektrik eletrik mgbe anyị na-ekwu maka ntinye eletriki nke ụlọ (nke na-agbanwe agbanwe) na nke elektrọnik (DC) mgbe ị na-ezo aka na PC.
Otú ọ dị, ịbụ ọtụtụ ihe ihe:
Eletrik: mgbe usoro ihe a na - eme ugbu a na - achịkwa ụfọdụ ndị na - arụ ọrụ, dịka ntanye, ngbanwe, wdg. N'ime okirikiri ndị a, enweghịkarị ihe na-arụsi ọrụ ike, naanị ihe ndị na-enweghị atụ (nguzogide, capacitor, transformer, diode, wdg)
Kọmputa: mgbe usoro nke ugbu a na-achịkwa akara eletrik ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, ya na transistor nke a na-etinye volta n'ọnụ ụzọ iji kwe ma ọ bụ ghara ịfefe n'etiti isi iyi na igbapu. Nke ahụ bụ, ka akpọọ ya otu a, ọ ga-enwerịrị opekata mpe otu ihe na-arụ ọrụ.
Yabụ, na electronic circuit bụ otu na nke ọkụ eletrik nwere ike ijikwa ọkụ eletrik. Ma n'ime ha abụọ enwere ike ịnwe ihe dị iche iche nwere ike ịbụ ihe nkịtị: transistors, diodes, bulb light or LEDs, resistors, coils / inductors, capacitors, wdg.
Electronicdị eletrọniki eletrọniki
na ụdị nke ikuku eletrik dabere n’otú e si debe ihe ndị ahụ, ha bụ:
Na usoro: na sekit nke ejiri abụọ ma ọ bụ karịa (bọlbụ, ikanam, moto, transistor,…) jikọtara na usoro ọ bụla, ya bụ, otu mgbe ọzọ. Site n'ime ka ugbua na-asọba site na akụrụngwa nke sekit n'otu ụzọ.
Ke ukem: na nke a ọ ga - abụ mgbe ejikọtara ihe ndị ahụ na - arụnyere. Nke ahụ bụ, a ga-enwe ụzọ dị iche iche nke ugbu a nwere ike isi gafere. N'okwu a, ọ bụrụ na otu n'ime ihe ndị dị na usoro kwụsịrị ịrụ ọrụ, ndị ọzọ nwere ike ịga n'ihu na-enweta ike.
Ngwakọta: ha bụ ihe kachasị na-agakarị, ma jikọta ma ihe abụọ na usoro na ihe ndị yiri ya.
Ọ bụrụ na anyị aga Kedu ka okirikiri dị ma ọ bụ nhazi na ọkụ eletrik na-aga, ị nwere ike ịiche ọdịiche dị n'etiti:
Cerrado: ọ bụ na sekit nke ụzọ ya na-enye ohere ikesa nke ugbu a , na-eme ka uru nke ugbu a dabere na ibu ahụ.
Mepee: mgbe enwere mmejọ ma ọ bụ onye na-eduzi ihe ọkụkụ, ma ọ bụ ụfọdụ mmewere (dị ka ntụgharị), ha na-egbochi ugbu a ka ọ na-asọ.
Obere oge: a na-akpọ sekit dị mkpirikpi ihe mkpanaka nke okporo osisi abụọ (+ na -) jikọrọ ọnụ, na-eme ka sekit kwụsị ọrụ. Nke a nwere ike ime n'ihi na enwere ihe mmezi n'etiti egwu ma ọ bụ eriri mmachibido, n'ihi na mkpuchi nke na-ekpuchi ndị na-eduzi ya emebiwo, wdg.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » General » Pesdị sekit eletriki dị ugbu a
Kwadobe: ihe niile ị chọrọ ịma gbasara ihe ndị a